Suuriya: Weerarka Kiimikada Xalab oo horseeday duqaymaha diyaaradaha Ruushka - BBC News Somali
Image caption Tiro kamid ah shacabka magaalada Xalab ayaa neefta ku dhegtay markii Kiimiko lagu weeraray halkaasi
Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa duqayn cirka ah ka gaystay deegaanno ay ku xooggan yihiin mucaaradka Suuriya, wuxuuna ku eedeeyay maleeshiyaadka ka dagaallamo Suuriya in hub Kiimiko ah ay ku weerareen magaalada Xalab ay dowladda haysato.
Dowladda Suuriya iyo Ruushka waxay sheegeen in weerarka Kiimikada ah ay ku dhaawacmeen 100 qof oo ay neefta ku dhegtay.
Kolonyo gargaar sidday oo ay leedahay Qaramada Midoobay oo gaartay xero barakacayaal oo ku taal dalka Suuriya
Xukuumadda Dhimishiq iyo Ruushka waxay leeyihiin kooxaha mucaaradka waxay adeegsanayaan sunta Koloorinka ee la mamnuucay.
Zaher Baddal oo ah madaxa dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Xalab ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu yahay weerarkii ugu horreeyay ee sunta loo adeegsaday ee ka dhaca magaalada tan iyo sannadkii 2011-kii oo ay dagaallada bilaabmeen.
Dalalka reer galbeedka iyo Qaramada Midoobey waxay ku eedeeyeen ciidammada dowladda Suuriya in marar badan deegaanada mucaaradka ay ku weerareen hubka Kiimikada.